Home AKOTKỌ AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKW FOKWỌ AKW FOKWỌ Ndị egwuregwu bọọlụ Dutch Steven Bergwijn Akụkọ gbasara nwatakịrị gbakwunyere Eziokwu Untold Biography
Anyị Steven Bergwijn Biography na-agwa gị Eziokwu gbasara Akụkọ nwata ya, Ndụ mbido, Ndị nne na nna, Ezinụlọ, Enyi nwanyị / Nwunye ka ọ bụrụ, Cgbọ ala, Net Worth, Web na Personal Life.
Na nkenke, nke a bụ Ndụ Ndụ nke ndị ọkachamara na Dutch. Anyị na-amalite site n'oge ọ bụ nwata, ruo mgbe ọ ghọrọ onye a ma ama. Iji mee ka agụụ autobiography gị sie ike, nke a bụ oge ọ bụ nwata gaa na gallery - a nchịkọta zuru oke nke Steven Bergwijn's Bio.
Steven Bergwijn Ndụ Mbido na Nnukwu Nbili.
Ee, onye egwuregwu si Ezinụlọ Surinamese amaara na inwe ezigbo onyinye nwere nnukwu anya maka ịme goolu. Agbanyeghị, ọ bụ naanị aka ole na ole n'ime ndị egwu tụlere mbipute anyị nke Steven Bergwijn nke bụ ihe na-atọ ụtọ. Ugbu a na-ebuteghị ọzọ, ka anyị bido.
Steven Bergwijn Child Story Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Eziokwu Akụkọ - Ndụ mbu na Ezigbo Ezinụlọ
A mụrụ Steven Charles Bergwijn na 8th nke October 1997 na nna ya, Jurgen Berwijn Sr na nne (nke a na-amaghị nke ọma) n'obodo Amsterdam, Netherlands. N'okpuru ebe a bụ foto nke nne na nna Steven Bergwijn- nna ya a na-egbu egbu nke ukwuu nke ọ na-adị ka ya na nwanyị mara mma nke nwere ike ịbụ nne ya.
Zute nne na nna Steven Bergwijn. Papa ya na-egbu egbu nke ọma na nwanyị mara mma nke nwere ike ịbụ nne ya.
N'ịchọpụta ọdịdị ihu, ị nwere ike ịkọwa ngwa ngwa na ezinụlọ Steven Bergwijn abụghị Dutch zuru oke. Ị maara?… A mụrụ nne na nna Steven Bergwijn na Suriname.
Foto dị n'okpuru, ikekwe ị gaghị ama na mba nke Suriname ebe Ezinụlọ Steven Bergwijn si na mpaghara ugwu ọwụwa anyanwụ Atlantic nke South America.
Nke a bụ Suriname ebe ndị nne na nna Steven Bergwijn si.
Dịka a hụrụ n’elu si na map google, Suriname Oke Osimiri Atlantic dị na North, French Guiana n'ebe ọwụwa anyanwụ, Guyana n'akụkụ ọdịda anyanwụ yana Brazil na ndịda. Eziokwu ahụ bụ na mba ahụ nweburu Netherlands na-akọwa ihe kpatara ọtụtụ ndị si n'ezinụlọ Suriname sitere na Amsterdam.
Steven Bergwijn Ndụ mbụ: Steven Bergwijn nwere ezigbo ezigbo ọzụzụ n'ụlọ ezinụlọ ya na Almere (obodo ahaziri na obodo dị na Flevoland, Netherlands). O tolitere na nzụlite ezinụlọ dị nro ma nwee mmetụta dịka ụdị nwatakịrị nwere ike inweta ihe ọ bụla ọ chọrọ dịka nwatakịrị.
Na-ekwu maka ihe ọ chọrọ, n'okpuru bụ foto nke anyị Bergwijn nke anyị ejide na ikekwe ala karama nke Heineken Bier na nwata.
Foto a na - adịghị ahụkebe nke Steven Bergwijn gosipụtara ị drinkingụ mmanya Heineken dị ka nwatakịrị.
N'ikpe ikpe site na foto dị n’elu, ị nwere ike iche O nwere ike ịbụ na nne na nna Steven Bergwijn nwere ya dịka nwa ikpeazụ na nwa nke ụlọ ahụ. Eziokwu bụ, tọ Dribble King (aha otutu ya) Amughi dika nwa ikpeazụ ma otu n'ime ụmụ atọ nne na nna ya.
Ya na nwanne nwoke na nwanne ya toro. N'okpuru ebe a, obere Steven Bergwijn na nwanne ya nwoke. Gaghị ekwenye na onye nọ nzụlite ha n'oge ụmụnne abụọ sere foto ahụ. Ọfọn, ị ga-amata na ngalaba na-esote nke isiokwu a.
Zute nwanne nwanne Steven Bergwijn. Brothersmụnna nwoke abụọ nwere akụkọ akụkọ.
Steven Bergwijn Child Story Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Eziokwu Akụkọ - Nkụzi na ịrụ ọrụ
Mmụta mbụ nke football ya na papa ya site na Drills: N'inwe nne na nna na-ahụ n'anya football maka nna, ọ bụ ihe dị mma ịhụ Steven Bergwijn ka ọ hụrụ n'anya na egwuregwu ahụ mara mma. Nna ya Jurgen Berwijn Sr kụnyere ịhụnanya nke egwuregwu mara mma n'ime ya ozugbo ọ pụrụ ịga ije.
Mgbe ọ na-etolite dị ka nwatakịrị, Steven Bergwijn nọrọ ọtụtụ oge gụrụ akwụkwọ na egwuregwu site na papa ya. Dabere na IheNgoroNkwa, nna na nwa nwoke mere ọtụtụ egwuregwu bọọlụ tupu ọ malite ịkụ aka ọrụ. N'okwu Steve Berwijn;
“Papa m ga-atụba bọl na ikuku, dị ka, ụzọ, ụzọ, ma ọ bụ elu. ọ kụziiri m otú e si achịkwa ya n'ụzọ dị iche iche. Mgbe ụfọdụ n'obi m, mgbe ụfọdụ n'ụkwụ m. ”
Jurgen Berwijn Sr si mkpebi siri ike ịhụ nwa ya nwoke ka ọ bụrụ ndị na-agba ọsọ abụghị naanị echiche efu. Iji kwado egwuregwu egwuregwu football ya, o debanyere obere Steven ASC Waterwijk, obere ụlọ akwụkwọ dị na mpaghara ezinaụlọ.
Inata agụmakwụkwọ bọl ezuru m. Ị maara?… Ndị nne na nna Steven Bergwijn nwere nnukwu mmasị na egwuregwu ahụ, mmepe nke hụrụ ha ịchekwa ego iji mee ka ezinụlọ ha dum gaa Spain iji lelee FC Barcelona.
Otu o si zute Lionel Messi mgbe ọ dị afọ 10: Na afọ 2008, Ezinụlọ Steven Bergwijn nwere njem na Spain iji lelee egwuregwu n'etiti Levante na Barcelona, ​​egwuregwu nke ndị Catalan meriri 5-1.
Luckily, Steve Berwijn na nwanne ya nwoke, nwanne ya na nne na nna ya gbazitere ọnụ ụlọ n'otu ụlọ nkwari akụ ebe Frank Rijkaard si Barça bụ. Ị maara?… N'ime ụlọ nkwari akụ ahụ Frank Rijkaard si otu na Xavi, Iniesta, Ronaldinho, Eto'o na n'ezie Messi.
Na nkwari akụ ahụ bụ ụlọ kọmpụta ebe nwanne nwanne Steven Bergwijn gụnyere ya onwe ya ga-egwu egwuregwu. Ọụ nke obere Steven na nwanne ya nwoke amaghi oke mgbe Lionel Messi ya na ndị otu ya banye n'ime ụlọ kọmputa. N'egbughị oge, o jiri ohere ahụ were foto ndị ahụ ewu.
Obi ụtọ Bergwijn (agadi 10) nwere ihe ùgwù izute Messi na nkwari akụ ebe ezinụlọ ya nọrọ mgbe ha lechara egwuregwu Barca.
Steven Bergwijn Child Story Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Eziokwu Akụkọ - Ndụ Ndụ Mmalite
Nzute Lionel Messi bụ ihe gbara ọkpụrụkpụ na-agba ndị egwuregwu bọọlụ ọsọ. Dika nwatakiri Steven toro, usoro egwuregwu nke nna ya siriwanye ike. Mkpa ọ ga-aka gafere ihe agụmakwụkwọ ya (ASC Waterwijk) nke a na-enye na-ahụkwa.
N'ihi nke ahụ, Ndị nne na nna Steven Bergwijn họọrọ nwa ha nwoke ka ọ soro ya gaa ikpe Agụmakwụkwọ Ajax- ahụ ụlọ ọrụ Dutch nwere nkà na-ewu ewu amara maka “ngụkọta football”Ịbịakwute agụmakwụkwọ football. Obi dị m ụtọ na ọ gafere ule ha site na agba agba.
Ibute akwukwo na ulo akwukwo nke “Nchịkwa Bọọlụ”Bụ ihe Papa Steven Bergwijn chọrọ ya. Steven makwaara na igwu egwu na ụlọ akwụkwọ sekọndrị chọrọ nnukwu ọrụ.
Dabere na ThePlayersTribune, Steven Bergwijn mgbe ọ nọ n'ụlọ akwụkwọ Ajax ka ebilila ọtọ 5: 30 am. N'oge ahụ, nna ya ga-akpụrụ ya na klọb na-apụ na ya. Ị maara?… Mgbe ọ na-azụ ọzụzụ, papa ya na-ehi ụra mgbe ụfọdụ n'ime ụgbọ ala ruo oge awa ọzụzụ zuru.
Steven Bergwijn Child Story Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Eziokwu Akụkọ - Akpanwu akwukwo akuko
Nsogbu Ajax: Steven Bergwijn nwere oge siri ike ijikwa mmekọrịta ya na njikwa nke Ajax, ihe ngosi nke hụrụ na ya na ụlọ akwụkwọ agụmakwụkwọ na-akwụsị n'oge na-adịghị anya na 2011. Ị maara?… Steven Bergwijn nwere nsogbu mgbe niile na otu n'ime ndị na-azụ ndị ntorobịa klọb.
N'oge ederede, enwere obere akwụkwọ gbasara esemokwu ahụ. Otú ọ dị, otu ihe doro anya. Ezinụlọ Steven Bergwijn hapụrụ afọ ojuju na ọgwụgwọ e nyere nke ha. Nke a na-esote nne na nna ya na-eme mkpebi maka Steven ịhapụ agụmakwụkwọ.
Olile anya nke PSV: Followinggbaso oge enweghị obi ọfụma na Ajax, PSV gbara aka ozugbo ma bute onye ahụ na-eto eto. Obi dị m ụtọ na ọ bịara kwezie ka Steven nụ ụtọ egwuregwu bọọlụ ọzọ.
Nwatakịrị ahụ malitere ngwa ngwa mgbe ọ kwagara PSV. Steven rụrụ ọrụ ya Eindhoven ulo akwukwo, na-akpụ akpụ elu ulo akwukwo. Na PSV, ọ ghọrọ onye ọkpụkpọ nke nwere ike igwu egwu na ụdị ọgụ ọ bụla, onye ọ na-atọ ụtọ ikiri ma nwee mmụọ na-enye obi ụtọ.
Ọụ nke ezinụlọ Steven Bergwijn amaghi oke n'oge a kpọrọ ya ka ọ nọchite anya ndị ntorobịa U17 nke Netherland n'afọ 2013.
Steven Bergwijn Child Story Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Eziokwu Akụkọ - Na-ewu ewu Akụkọ
Ihe mbụ Steven Bergwijn nwere maka mmeri footballing bịara na asọmpi 2014 UEFA U17 nke emere na Malta. Nke a bụ ezigbo nkwado kwesịrị ekwesị na nkwenye n'eziokwu ahụ na ọ nọ na njedebe nke ịghọ ndị na-agba ọsọ nke ọma.
Ị maara?… N'egwuregwu ahụ, Steven Bergwijn meriri UEFA European Under-17 Championship Golden Player ma tinye ya n'ime Otu egwuregwu nke European European Under-17 nke egwuregwu.
Mgbe Bergwijn mechara nwee nnukwu ihe ịga nke ọma na agba mba, agbapụrụ ya iji mee ka ụlọ ọrụ ọkachamara ya na Jong PSV nke bụ otu egwuregwu PSV Eindhoven.
N'oge nke mbụ ya na ndị otu PSV, ndị ezinụlọ Steven Bergwijn ga-eme ụgbọala ahụ ọzọ, n'oge a, iji hụ otu n'ime ha mere akụkọ ihe mere eme megide ọgbakọ obodo ha. N'ikwu okwu banyere ụbọchị mbụ ya dị ka ndị ọkachamara n'ịgba ọsọ, o kwuru otu oge;
“N’ọnwa Ọktọba 2014, emere m oche ahụ dị na Almere n’obodo m. Ọ bụ asọmpi PSV megide Almere City. Amaghị m na m ga-egwu egwu, mana amaara m na enwere m ohere. Ndị otu anyị bidoro nke ọma. Site na nkeji 75, ndị otu m nọ na 3-1. Na ọkara nke abụọ, anọgidere m na-agbalị ime ka onye njikwa m, Phillip Cocu contact like, Cemon, nwoke, wetara m!
Mgbe anyị gbasịrị nke anọ, onye nchịkwa ahụ lere m anya wee sị, 'Gaa na-ekpo ọkụ'. Nkeji ise ka m gụsịrị, na-egwu PSV na ama egwuregwu nkeji ole na ole site na ụlọ ochie m yana ezinụlọ m niile na oche. Otu n'ime ihe mbụ m metụrụ, bọl ahụ bịakwutere m, m tụgharịrị, hụ Gini Wijnaldum ka ọ na-agba ọsọ na mgbaru ọsọ m wee nye ya aka na mbido m nke mechara 5-1. EZI!!.
Kemgbe mpụta mbụ ya, onye ahụ ka nwere ike ịdabere na Steven iji mee ọtụtụ ebumnuche na enyemaka. Oké ọsọ ya jikọtara ya na usoro nka ya na ikike ịgụrụ egwuregwu ahụ, jide n'aka na ọ bụ onye egwu pụrụ iche. Dị ka ụgwọ ọrụ maka ịrụsi ọrụ ike ya, + Jose Mourinho na 29th nke January 2020, nyere Bergwijn nkwekọrịta afọ ise na Tottenham Hotspur. Ndị ọzọ, dị ka ha na-ekwu, bụ akụkọ ihe mere eme.
Steven Bergwijn Child Story Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Eziokwu Akụkọ - Ndụ mmekọrịta
Site na mmụba ya na ịbụ onye a ma ama na imere onwe ya aha na football, o doro anya na ọtụtụ ndị bekee bekee ga-achọ ịma ma nwoke ịga nke ọma dịka Steven Bergwijn nwere enyi nwanyị ma ọ bụ na ọ lụọla nwanyị n'ezie, nke pụtara na ọ lụrụ nwanyị.
N'azụ ọkpọ egwuregwu na-aga nke ọma, enwere (n'oge ederede) enyi nwanyị mara mma nke na-aga n’aha; Chloe Jay. Steven bidoro iso enyi nwanyị ya na afọ 2015, nke bụ afọ mgbe ya na ọkachamara izizi maka ndị otu PSV. N'okpuru ebe a bụ foto foto nke ịhụnanya abụọ ka ha na-abịa maka nkịta mmetụ nke nkịta na nkịta. Ị maara?… Chloe Jay dị afọ karịa Steven.
Steven Bergwijn na enyi ya nwanyị bụ Chloe Jay na-egwu nkịta.
Site na ihe anyị chịkọtara na nyocha, enyi nwanyị nke Steven Bergwijn nwere ọtụtụ ọrụ. Mara mma Chloe Jay bụ a agba egwú, model na influencer ya na ọtụtụ puku ndị na-eso ụzọ ya na akụkọ mgbasa ozi ya. Nwa nwanyi mara nma bu onye n’enwe ntukwasi obi na idi ocha na mma ya.
Zute Nwanyị Nwanyị Steven Bergwijn- Chloe Jay.
Ọzọ, Chloe Jay bụ onye achọghị ọdịmma onwe ya naanị nke anaghị eme ihe ọ bụla karịa inye nkwado nke enyi ya nwoke. Na-ekpe ikpe site na ọtụtụ ntanetị mgbasa ozi ha, o doro anya na ndị nne na nna Steven Bergwijn nwere mmekọrịta ha. Nke a site na itinye aka pụtara agbamakwụkwọ nwere ike ịbụ usoro iwu ha na-esote.
Steven Bergwijn Child Story Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Eziokwu Akụkọ - si ebi ndụ
Arningnweta £ 11,000 na ụgwọ ọrụ kwa izu na onye na-akwụ 572,000 na ụgwọ kwa afọ + ụgwọ ka mma nke Tottenham bụ ego zuru ezu iji bie ndụ ndụ ebe ọ bụ naanị mkpa dị mkpa maka onwe ya, ndị ezinụlọ na ndị enyi.
N’ikwu ya n’ụzọ dị mfe, Steven Bergwijn bụ BỤGHỊ ihe ngwọta nke ndụ dị oke ọnụ ma dị umeala n'obi. Nke a na-ahụ nke ọma site n'ụgbọ mmiri ya dị iche iche na igwe kwụ otu ebe. Foto dị n'okpuru chịkọtara ndụ Steven Bergwijn.
Ndụ Steven Bergwijn- lovehụnanya o nwere maka ụgbọ ala na igwe kwụ otu ebe abụghị ụwa a.
Steven Bergwijn Child Story Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Eziokwu Akụkọ - Ndụ nke Onye
Har ga-agharịrịrị peers; Ọnye na-bụ Steven Bergwijn? Olee ụdị mmadụ o nwere si n'olulu ahụ?… Ugbu a ịmata ihe banyere ndụ Steven Bergwijn ga - enyere gị aka ịmata onye ọ bụ.
Bido, ọ bụ ndị egwuregwu bọọlụ nọchiri anya mmadụ abụọ ma ọ bụ karịa dị iche iche ị na-agaghị amata onye ị ga-eche ihu. O nwere ike iyi ka ọ dị ezigbo umeala (dịka ịhụ ya ka ọ na-agba igwe kwụ otu ebe ma ọ bụ na-arụ ọrụ dị ala), ma ọ bụ ịbụ ọkụ na-ere (hụrụ ya n'ụgbọ ala Mercedes-Benz mara mma). A ga-ahụ ha abụọ na foto ndụ ya dị n'elu.
Ọzọkwa na Ndụ onwe Steven Bergwijn, ọ bụ onye obi tara mmiri, dị njikere mgbe niile inwe ntụrụndụ na obere ebumnuche nke ịbụ ihe siri ike, na-eche echiche ma na-enweghị ike. N'egwuregwu bọọlụ, Steven na-ebikwa ndụ dị mma na-enye ume ọhụrụ n'ụlọ ya nke ọnụ ụlọ ya buru ibu iji tozuo ndị otu Tottenham.
Mata Steven Bergwijn Ndụ nke Onwe ya pụọ ​​na olulu ahụ.
Steven Bergwijn Child Story Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Eziokwu Akụkọ - Ndụ Ezinụlọ
Steven si n'ezinụlọ na-elekọta mmadụ nke hụrụ naanị onwe ha n'anya. Nna ya, nwanne nwoke na nwanne ya nwanyị emeela ihe niile n'ụzọ ha iji hụ na ọ ga-aga nke ọma. N'akụkụ a, anyị ga-enye gị ozi ndị ọzọ gbasara ndị ezinụlọ Steven Bergwijn na-amalite site na ndị mụrụ ya bụ ndị ọ na-asọpụrụ site na itinye ọkọlọtọ Suriname na otu akpụkpọ ụkwụ ya.
Inwe Suriname Flag na otu n'ime akpụkpọ ụkwụ ya na-egosi otú ndị na-agba ọsọ Dutch si asọpụrụ ndị mụrụ ya.
More banyere papa Steven Bergwijn: Steve Bergwijn na-akọwa nna ya Jurgen Berwijn Sr dị ka onye maara egwuregwu ya karịa onye ọ bụla na nke abụọ, nnukwu onye ofufe + ya kachasị mma. Dị ka a hụrụ n'okpuru, Jurgen Berwijn Sr nwere mmasị ịnọnyere ụmụ ya nwoke n'igbe ala uhie na n'ofe ya.
Steven Bergwijn Ndụ Ezinụlọ- Foto dị na ya na nna ya na nwanne ya.
More banyere nne Steven Bergwijn: Ndị nne mụrụ amụọwo nnukwu ụmụ Steven Bergwijn si abụghị wezuga. Dika ezigbo nne nwere uche, ebumnuche ya bụ ịhụ ka nwa ya nwoke tolite ma nwee ọńụ ma nwekwa ọganiihu dịka ọ dịgodi Amabeghị ihe banyere aha ya, mana ọ dị ka onye gbalịsiri ike izere ọhụụ ọ bụla na ndụ ya.
More banyere ụmụnne nwanne Steven Bergwijn: Steven nwere nwanne nwoke na nwanne nwanyị, ha abụọ dị njikere inye ike ha niile iji nyere ya aka ime mgbanwe na England. N'okpuru ebe a bụ foto nwanne ya nwanyị mara mma na nwanne ya n'anya ka ha hụrụ aha ndị Tottenham na-abịanye aka.
Zute Nwanne nwanyị Steven Bergwijn.
Steven Bergwijn Child Story Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Eziokwu Akụkọ - Eziokwu efu
Stevendị Steven Bergwijn: Omenala igbu egbugbu ejiri obi ya nabata ndị nne na nna Steve Bergwijn - ọkachasị nna ya nwere ọtụtụ inks. Hụnanya maka nka ahụrụ n'anya ugbu a gafere ya dịka o jiri inks kọwaa okpukpe ya, ihe na ndị ọ na-ejide na-eche n'obi ya.
Steven Bergwijn Eziokwu oodị.
Dika edeputara n’elu na n'okpuru, Steve Bergwijn bu ihe aficionado. Onye na-agba ụkwụ ji ọrụ ya na egbugbu ya egwu egwu. Ihe aka ya gụnyere nchịkọta ihe osise nke nnụnụ n’obi ya na ọtụtụ ihe ndị ọzọ dị mma na-esite n’olu ya ruo n’akụkụ ọnụ ya na ụkwụ ya.
Ogbugbu Steven Bergwijn- Gini ka ha putara?
Nkwanye ugwu maka ebe amụrụ nne na nna ya: Ndị nne na nna Steve Bergwijn nwere obi ụtọ na nwa ha nwoke na-asọpụrụ mba South America - Suriname nke bu ebe amuru ha. Dabere na Steven site na ThePlayersTribune;
“E tinyere m ọkọlọtọ Suriname n'otu n'ime akpụkpọ ụkwụ m n'ihi na a mụrụ m na nne na nna ebe ahụ, ọdịbendị Surinamese bụ akụkụ buru ibu nke ndụ m”
Steve Bergwijn chọrọ ka onye ọ bụla mara agbụrụ ezinụlọ Suriname ma ọ na-ahụ igosipụta ọkọlọtọ mba ahụ na akpụkpọ ụkwụ ya dị ka ụzọ kachasị mma iji nweta mgbasa ozi dị otú ahụ.
Ndị egwuregwu Dutch a na-amabughị na ndị si Surinamese: Ikekwe ị maghị na ndị egwuregwu a (nke dị ugbu a na ndị lara ezumike nka) nwere nne na nna ha ma ọ bụ onwe ha mụrụ na Suriname. Ha gụnyere; Ruud Gullit, Frank Rijkaard, Edgar Davids, Clarence Seedorf, Patrick Kluivert, Georginio Wijnaldum, Virgil van Dijk, Jimmy Floyd Hasselbaink na Ryan Babel.
Obi abụọ adịghị ya, e nwere nnukwu aha ndị sitere na agbụrụ Surinamese bụ ndị a na-akwanyere ùgwù na football. Ọ bụghị ihe ijuanya ịhụ ihe kpatara ezinụlọ Steve Bergwijn ji enwe mmasị mgbe niile ịga Spain iji lelee FC Barcelona nke nwanne Surinamese nke ha - onye Frank Rijkaard zụrụ.
Religion: Ndị nne na nna Steven Bergwijn si mba (Suriname) ebe e nwere ọtụtụ Ndị Kraịst si na Roman Katọlik. Dabere na Ihe eji eme Taddlr, o nakweere okpukperechi nke ndi Kristain ma kwere na Chineke.
Ikike nke FIFA: Nkọwa Steven Bergwijn FIFA tinyere ya dịka otu n'ime ndị na-ekwe nkwa egwuregwu bọọlụ na FIFA. Inwe ikikere nke FIFA nke 87 n’eme ka oji ahia zuru ike maka ndi n’eto FIFA n ’ndi choro ipu onye nwere ezigbo mwakpo, ikike, mmeghari na ikike.
Steven Bergwijn FIFA Ratings na Ike.
Nyochaa: Daalụ maka ịgụ Steven Bergwijn Childhood Story Plus Ihe Ntanye Untold Biography. Na LifeBogger, anyị na-agbasi mbọ ike maka izi ezi na ịkwụwa aka ọtọ. Ọ bụrụ n'ịchọta ihe na-adịghị mma, biko kọọrọ anyị ya site na ịza ajụjụ n'okpuru. Anyị ga-eji nkwenye gị kpọrọ ihe mgbe niile.